Kamiaobe roa nifandona : maty ny mpamily roa, maro no naratra | NewsMada
Tapaka nandritra ny ora maromaro mihitsy ny lalampirenena faharoa, noho ity lozampifamoivoizana nitranga tao Ampasimadinika Manambolo, omaly maraina ity. Kamiao be roa samy nitondra entana no nifandona. Maty avokoa ny mpamilin’ireo kamiao ireo, ankoatra ireo naratra maro.
Tsy tafala tao anaty kihon-dalana ireto kamiao roa ka nifandona, tany Ampasomadinika Manambolo, lalam-pirenena faharoa, omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina. Maty avokoa ny mpamily roa lahy tao amin’ireo fiara roa. Nisy ihany olona hafa naratra, izay voalaza fa nitondra mpandeha izy ireo ankoatra ny entana. Kamiao semi-remorique sy kamiao tsotra iray ireto nifandona ireto. Voalaza fa nifanena ny fiara roa, ka nisy nangalatra lalana. “Niala lalana ny iray; ny iray, nifanena ka nifandona ny fiara roa. Latsaka tanaty hantsana ny iray raha nivadika teo amin’ny arabe ny faharoa”, hoy ny fanazavana. Ratsy ny lalana sady nanorana ny andro tany an-toerana nandritra ny loza.
Tery tao anaty kamiao ireo mpamily, ary anisan’ny nahafaty azy ireo izany. Vokatry ny ratra nahazo azy, namoy ny ainy izy ireo. Nanahirana rahateo ny nisokitra ny mpamily tery. Niezaka nanavotra ihany ny olona, saingy tsy nisy azo natao intsony.
Tapaka mihitsy ny lalana tany an-toerana vokatr’ilay kamiao nivadika teo amin’ny arabe. Naharitra ora maro izany fahatapahana izany, mandra-piandry ny fiara nisintona azy ireo niala teo. Ireo naratra kosa,s nalefa tamin’ny fiara nandalo nankany Toamasina.
Isehoana loza matetika
Isehoana loza matetika ihany koa ny any amin’ny lalam-pirenena faharoa. Mazàna ireo kamiao mivadika na mifandona amin’iny lalana iny. Antony mahatonga izany ny fahateren’ny lalana kanefa manoran-dava. Eo ihany koa ny lalana ratsy. Potika sady feno kilavadavaka iny lalam-pirenena faharoa iny amin’izao fotoana izao. Teo ihany koa ny takaitra navelan’ny rivodoza. Misy fotoana rehefa misy kamiao mivadika, manapaka lalana iray andro na roa andro mihitsy izany. Fitandremana amin’ny fandehanana mora sy ny fifanajana ny hisorohana ny loza, indrindra ho an’ny fiarabe tahaka izao, na ny taksiborosy ihany koa.